ဒူဘိုင်းက ချမ်းသာတဲ့သူဌေးတွေရဲ့ ရည်းစားဖြစ်ချင်လို့ အရှက်မရှိ ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ တ ရု ပ်မ များ – Myanmar Update News
News-Update | March 30, 2021 | International News | No Comments
ရာနဲ့ချီတဲ့ တရုတ်ပြည်က အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒူဘိုင်းက သန်းကြွယ်သူဌေးတွေနဲ့ Date လုပ်ခွင့်ရဖို့ ပြိုင်ပွဲဝင်
တစ်ချိန်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ရဖို့ အမျိုးသာေးတွ ပြိုင်ခဲ့ကြရပေမယ့် ခုခေတ်ကတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ရဖို့ အမျိုးသမီးတွေ ပြိုင်ဆိုင်နေတာများလားလို့ တွေးစရာ ဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။တရုတ်အမျိုးသမီး ၃၀၀ ကျော်ဟာ
တရုတ်နိုင်ငံ Chengdu မှာကျင်းပမယ့် Dating ပြိုင်ပွဲရဲ. နောက်ဆုံးဇကာတင် စာရင်း ၂၁ ဦးထဲ ပါဝင်ဖို့ ယှဉ်ပြိုင်နေကြပါတယ် ။ သူတို့ဟာ ဒူဘိုင်းက သန်းကြွယ်သူဌေးတွေနဲ့ date လုပ်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပြီး ၊
ဘဝကို ချမ်းသာစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းခွင့် ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေကြတာပါ။ ဒီပွဲကို တရုတ် dating ကုမဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Meimeng က စီစဉ်တာဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ၂၀၀၀ လောက်က သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့်
ဒူဘိုင်းက ဒေါ်လာ ၇.၆ သန်းအနည်းဆုံး ချမ်းသာတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးနဲ့ ရည်းစားအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ အွန်လိုင်းကနေ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီပြိုင်ပွဲ လျှောက်ထားသူ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၁၉ နှစ်ကနေ ၄၈ နှစ်ကြား ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပြီး
အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် ကျောင်းဆရာမ ၊ ယောဂသင်တန်းဆရာမ ၊ ဘွဲ့ရနဲ့ အလှမယ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်သူ အမျိုးသမီး ၂၀၀၀ ကျော်ရဲ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ သူတို့ရဲ. ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း နဲ့ အတိတ်က ဆက်ဆံရေးတွေကို အဆင့်သုံးဆင့်နဲ့
ဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီး ၂၈၀ ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီထဲကမှ ကံကောင်းတဲ့ နောက်ဆုံးဇကာတင် ၂၁ ဦးဟာ ဒူဘိုင်းကို ဇွန်လထဲမှ ခရီးသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ c r d
အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်လာနှိုင်တဲ့ တရုပ်နိုင်ငံက ဧရာမရေကာတာကြီး